Kitapo lamba Bokeh 94 maimaim-poana hampiasaina amin'ny Noely | Famoronana an-tserasera
Tsy fantatsika ny antony, fa ny Vokany Bokeh manintona antsika rehetra. Manintona ny masontsika izany ary manintona antsika hijery izay hita eo amin'ilay sary. Ny fampiasany dia tsy vitan'ny sehatry ny sary sy sary ihany, fa mandaitra koa ho toy ny sary an-tsary, screensaver, ambadiky ny afisy na handrakofana ny tampon'ny karatra krismasy. Na inona na inona mandeha hampiasa azy.
Raha tsy hainao ny mamorona ny vokany dia tsy misy na inona na inona mitranga. Ho an'izay dia misy fampianarana na, raha kamo be ianao (ary manana fotoana ampy fotsiny ianao), sary nomen'ny olon-kafa. Amin'ity lahatsoratra ity no ahitantsika ny Fonosana lamba 94 bokeh ho azonao ampiasaina amin'ny asanao.
Ireo vokatra izay entinay anao ireo dia nomena ny pejy Lost and Taken mba haparitaka maimaimpoana avy amin'ny mpaka sary Jill Wellington. Jill dia mipetraka eo akaikin'ny magazay misy lohahevitra Krismasy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, izay voaravaka jiro miloko an-tapitrisany maro. Jill dia tia mandany ny fotoanany amin'ny fakana sary miaraka amin'ny vokatr'i Bokeh izay omen'ireto jiro ireto mba hampiasaina ao ambadiky ny sariny. Ny fahazoan-dàlana amin'ity loharanom-pahalalana ity dia mamela ny fampiasana azy roa ho an'ny tanjona manokana sy ara-barotra.
Tsy mampaninona anao ny mijery ilay Bilaogin'i Jill, samy hahitana ny fomba fampiasanao ireo vola ireo sy manafaka ny hafa.
Ampidino eto ny fonosana
Loharano - Very ary nalaina, Bilaogin'i Jill
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Textures » Teknolojia Bokeh maimaim-poana 94 ampiasaina amin'ity krismasy ity
Mamaly an'i Jordania